प्रेस युनियन सुनसरी, अध्यक्षमा अधिकारी र पुरीको दावेदारी, कस्को पल्ला भारी ? - Purbeli News
प्रेस युनियन सुनसरी, अध्यक्षमा अधिकारी र पुरीको दावेदारी, कस्को पल्ला भारी ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक १४, २०७५ समय: १०:१८:०२
सुनसरी । प्रेस युनियन सुनसरीको आँठौ जिल्ला अधिबेशनलाई लिएर कार्तिकको चिसोमा पनि माहोल गर्माएको छ । अध्यक्ष पदको लागी दुई जनाको मुख्य रुपमा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । दुवै पक्ष आक्रामक रुपमा चुनावमा होमिएपछि एकाएक चुनावी सरगर्मी समेत बढेको छ । यहि कार्तिक १५ गते बिहिबार सुनसरीको ईटहरीमा हुने आँठौ जिल्ला अधिबेशनमा जिल्ला अध्यक्षका लागी पवन अधिकारी र धनबहादुर पुरी अध्यक्षका लागी प्रतिष्पर्धा गर्दैछन । यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै सहमति नभएकोले पछिल्लो अबस्थालाई मध्यनजर गर्दा अध्यक्षका लागी निर्बाचन हुने लगभग निश्चित देखिएको छ ।
को हुन अधिकारी र पुरी ?
प्रेस युनियन सुनसरीको अध्यक्षका लागी दाबी गरिरहेका दुवै जना उम्मेदवार संयोगबश एकै ठाँउका परेका छन । उनीहरु दुबैजना सुनसरीको ईटहरी उपमहानगरपालिका तरहराका स्थायी बासिन्दा हुन । पत्रकारितामा अधिकारी केही समय अघि प्रबेश गरेका हुन । पुरी हाल प्रेस युनियन पुर्बाञ्चलका सचिब हुन भने अधिकारी प्रेस युनियन सुनसरीका सचिब हुन । अधिकारी प्रेस युनियन सुनसरीमा कार्यसमिति सदस्य हुँदै पदाधिकारी भएका हुन ।
राजधानीका बिभिन्न दैनिक पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा समेत अनुभव बटुलेका अधिकारी प्यावसन सुनसरीका सदस्य, बिज्ञापन संघका केन्द्रिय सदस्य, लगायत बिभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएर क्रियाशिल रहेका छन । पुरी पुर्बको एक चर्चित दैनिक पत्रिकामा काम गर्छन । उनी पनि बिभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध रहेका छन ।
के भन्छन युनियनका सदस्यहरु ?
युनियनका अधिकांश सदस्यहरु दुबैजना उम्मेदवार अध्यक्षका लागी योग्य भएको बताउँछन । कार्यसमिति सदस्य हुँदै सचिब भएका अधिकारीलाई एक पटक अध्यक्षका रुपमा काम गर्न अबसर दिनुपर्ने केही बताउँछन । पत्रकारितामा सक्रिय भएका हिसावले पुरी पनि अध्यक्षको लागी योग्य भएको र उनी प्रदेशमा सचिब भईसकेका कारण उनले प्रदेशमा या केन्द्रमा जानुपर्ने समेत अर्काथरी बताउँछन ।
युनियनको सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको ईटहरी,ईनरुवा,धरान र दुहवीमा रहेका सदस्यहरु समेत दुबै उम्मेदवारका पक्षमा रहेका छन । उनीहरु आफनो उम्मेदवार मजबुत भएको दाबी गरिहेका छन भने उम्मेदवार पनि आफु मजबुत भएको र निर्बाचनमा गए आफुले जित्ने दाबी गरिरहेका छन ।
यस्तो पनि हुन सक्छ ?
निर्बाचनका लागी २४ घण्टा समय बाँकी रहेका कारण अध्यक्षका लागी अधिकारीलाई दिएर पुरी प्रदेशको कुनै महत्वपुर्ण पदमा जानका लागी सहयोग गर्ने,केन्द्रमा सहयोग गर्ने सहमति अनुसार हुन सक्छ भने अधिकारीलाई प्रदेशमा कोषाध्यक्ष वा अन्य कुनै महत्वपुर्ण पदमा सर्बसम्मत गराउने गरी पुरीलाई अध्यक्ष छोड्ने सहमति हुनसक्छ । अर्कोतर्फ मोरङमा जस्तै ४ बर्षका लागी दुईजना अध्यक्ष राखेर दुई, दुई बर्षका दरले सहमति हुने सम्भावना समेत उत्तिकै छ ।
यस्तो छ चुनावी खेल ?
केही पुर्व अध्यक्षहरु र बर्तामान समितिका केही पदाधिकारीहरु अधिकारीका पक्षमा रहेका छन भने केही पुराना पत्रकार समेत अधिकारीकै पक्षमा देखिएका छन । उनीहरु अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाउन पाए आफुले पनि सम्मानजनक ठाँउ पाउने र अधिकारीको बिभिन्न मिडियामा राम्रो पहुँच रहेका कारण त्याँहा पनि ठाँउ बनाउन सकिने र आर्थिक रुपमा समेत सहयोग हुने कारण अधिकारीलाई जिताउन कम्मर कसेर लागेका छन । युवा जमात भने पुरीको पक्षमा रहेको छ ।
श्रमजीविहरुको नेतृत्व पुरीले गर्न सक्ने भन्दै उनीहरुको पुरीको पक्षमा खुलेर लागेका छन । केही सदस्य भने दहीचिउरे पारामा दुबैको मान्छे भन्दै दुबैतर्फ ठिक्क पारिरहेका छन । केही सदस्य भने जसरी पनि निर्बाचन हुनुपर्ने र आफनो उम्मेदवार रोज्न पाउनुपर्ने बताईरहेका छन ।